Kutheni le nto sifuna uqeqesho lube luyilo? | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Idla ngokuba xa sithetha ubuchule kunye nobugcisa njengoqeqesho olukhululekileyo. I-halo yempembelelo iza nangaliphi na ixesha losuku kwaye ikubeke emsebenzini. Iiyure azibali kwikhalenda yethu yiyo loo nto sizibonakalisa ngokwendalo xa sisebenza umsebenzi wethu. Umsebenzi wesikwere ofana nalowo wolawulo awuboniswa. Kwaye ekubeni singekho kulawulo, asinaso ishedyuli okanye izikhokelo. Ukuswela uqeqesho kuthintela nengqondo yethu.
Kutheni le nto sifuna uqeqesho lube luyilo? Ukunqongophala kweeshedyuli kunokusenza ukuba sisebenze ngaphezulu kwemfuneko, kwaye nangona ngamanye amaxesha kubonakala ngathi oku kuluncedo xa sibhaptizwe kwiprojekthi, ngamanye amaxesha ayisiyiyo. Amaxesha amaninzi ayisiyiyo. Oku kugqithisileyo kunokukwenza uphulukane namandla akho okugxila kwimisebenzi oyenzayo. Kwakhona, phulukana nomdla wakho ngokuqinisekileyo ungayiboni inkqubela phambili. Lo mzuzu xa singazi ukuba siqhubeke njani kungcono ukushiya.
Ngamanye amaxesha kukwenza ugqibe ukuyishiya, ukufikelela kumzuzu we "Ndiyaqala ngomso" kwaye ungene ukwala rhoqo ukugqithisa okungamkelekanga kwintloko yethu. I-Instagram, i-Facebook, njl. yiba ngamahlakani ethu ukuzalisa ezo zithuba. Kungenxa yoko le nto uqeqesho lubalulekile kuyilo ngokunjalo.
Abanye abantu abakwaziyo ukuba noqeqesho abaludingayo ngemini yabo yemihla ngemihla bayityhola "ngobuqhetseba obudala" beeyure ezisibhozo. Iiyure eziyi-8 zinokwahlulahlula usuku lwakho lube ngamacandelo amathathu: Lala, sebenza kwaye usebenzise ixesha lakho lasimahla. Nangona kuyinyani ukuba ukufikelela kuqeqesho olunje kunzima kwaye ayinguye wonke umntu ophumelelayo ubusuku bonke yenza olu lwakhiwo ngaphandle komzamo omkhulu wangaphambili kunye nexesha lokuzinikezela. Kodwa ukuba kukho amanyathelo athile esinokuwathatha ngaphambi kokufikelela incopho yenjongo yethu.
3 Ishawa kunye nobushushu bayo
Umsebenzi we-Damn wokuxukuxa amazinyo emva kwesidlo ngasinye. Ngamaxesha athile, abantu abaninzi bashiya lo msebenzi ngasemva kuba bajonge iselfowuni kwaye babone into enomdla kuloo mntu. Siyalibala okanye ngamanye amaxesha sizifumana singaphandle kwaye asikwazi ukuyenza. Lowo ngumbono walowo 'misebenzi' ilandelayo. Okokuba okuphazamisa ixesha lethu yeyona nto ibalulekileyo.
Umsebenzi olula njengokuxubha amazinyo kanye emva kokutya kuya kwenza umkhwa ngomhla wakho. Kwaye iya kuqala ngokwenza iodolo. Khumbula, musa ukutsiba.
Lo msebenzi ungaphinda wenzelwe ukuhlamba izitya. Ukuba unomkhwa wokuxubha amazinyo, unokuzama ukuhlamba izitya kanye xa ugqibile ukutya. Ayinamsebenzi nokuba unendawo yokuhlamba izitya okanye umntu sele eyenzile loo misebenzi. Xa ugqibile ukutya, isitya sakho, iglasi yakho kunye nokusika, zihlambe ngokwakho.
Kum, omnye weyona misebenzi inzima kwesiqhelo. Ukuvuka ebhedini nomsebenzi sele ukhona kwaye kufuneka uwenze. Kwaye ngokomgaqo ngenjongo yokuyilungisa emva kweeyure ezimbalwa kwangolo suku. Kodwa kuyimfuneko. Lo mkhwa uya kukunika iodolo ekuqaleni kosuku lwakho. Uyigqibile imishini yokuqala yosuku, ukujongana nabanye kuya kuba njalo elula ndondlula kanjani umandlalo.
Kwakhona, xa ubuyela ekhaya, iodolo iya kukunceda uphumle kwaye wonwabele lonke usuku ngaphandle kokwenza.
Ishawa kunye nobushushu bayo
Sonke siziva sinesidingo sokuhlamba ngobushushu bamanzi. Ukulwa ngezizathu zethu ngowona msebenzi unzima esijongene nawo. Sebenzisa imizuzwana yokugqibela yeshawa yethu ukujongana nobunzima kuya kusinceda siphumeze uqeqesho ngakumbi.
Zininzi iindlela zokuziphatha esinokuzilandela xa sisiya ekufezekiseni iinjongo zethu. Kuya kuxhomekeka kubomi bakho, ndicebise ukuba ndiziphathe kakuhle emsebenzini wam ngamanqaku, ukuba uyabhala, licebo elihle lokwenza njalo. Kukho ezintsonkothileyo kwaye ziqhelekile, kodwa into ebalulekileyo kukuba uqale. Ukuba ucinga ukuba awukwazi ukulandela la manyathelo ama-3 ngaxeshanye, qala ngenye. Kodwa yenze ibe yeyona nto ingonwabisiyo kuwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Kutheni le nto sifuna uqeqesho lube luyilo?